Lainga no avadibadika ho bainga voavadika | NewsMada
Lainga no avadibadika ho bainga voavadika
“Ny zava-misy eto amintsika amin’izao, politika mifototra amin’ny lainga sy ny kobaka am-bava no mibaribary hitam-bahoaka“, hoy ny Fivondronamben’ny eveka eto Madagasikara tamin’ny hafatra nampitainy farany teo. Tsy efa hatrany am-piandohana ve izay hoe lainga sy kobaka am-bava izay? Hosoka aza….
Teo, ohatra, ny kabary programa tamin’ny andro fianianana, izay nadika tamin’ny an’ny vahiny. Nandalo tamin’ny delestazy hoe foana ao anatin’ny telo volana. Ny fomba fanolorana praiminisitra, tsy araka ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana: tsy mampisy fahamarinan-toerana sy fitoniana politika.
Manana ny maro anisa indrindra eny amin’ny Antenimierampirenena, hono, na tsy mbola teraka aza tamin’ny fifidianana depiote. Tsy voahaja ny And. 72 amin’ny lalàmpanorenana, fa tsy mahazo miova vondrona parlemantera ny depiote. Kolikoly? Tsy navelan’ny birao maharitra hanadihady ifotony ny Bianco.
Ohatra ihany ireo amin’ireo lainga raofina, kobaka am-bava, hosoka… Eo koa ny raharaha tsy mazava, odian-tsy hita na avela ho vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao: “Raharaha Anjozorobe“, ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine“, ny “Raharaha Antsakabary“, ny “Raharaha Andriamandavy VII Riana”…
Miharihary amin’ireo ny hoe politika mifototra amin’ny lainga sy kobaka am-bava. Na fahefana mpanatanteraka io, na mpanao lalàna, na mpitsara… Hahagaga ve ny zava-misy sy izay iainana amin’izao fotoana izao? Loza ho amin’ny mpandainga; eny, na ny vahoaka aza no tena mitondra faisana amin’izao.
Ratsy ny lainga fa na ny mpandainga aza, tsy tia ny lainga: raha vao mandainga indray mandeha sy amin’ny voalohany, voatery mandainga hatrany enti-manamarina izany. Sazy ho an’ny mpandainga ny tsy maintsy ananany fitadidiana tsara sy ela amin’ny lainga ataony, sao hiampanga azy izany amin’ny farany.
Aza gaga àry raha mitohy hatrany ny lainga etsy sy eroa, tsianjery hatrany ny kabary tsy valina… Mbola misy andairan’izany ve amin’izao? Lainga tsinona no avadibadika ho bainga voavadika. Vavolombelona tsy lasa ny lainga avadibadika?